Zvekutengesa Kuvaka Nyowani Mhepo & Kupisa Solution
Yepamberi Yakadzika Ruzha Tekinoroji
3-Kurutivi U Rudzi Hwokuchinjana Chigadzirwa
3-padivi U-mhando kupisa chinja inoshandisa zvinobudirira fan yekufema, inowedzera zvizere kupisa kupisa nzvimbo uye inovandudza zvakanyanya kupisa kupisa kupisa pasina kuwedzera iyo unit nzvimbo.
Yakaomeswa chimiro, yakakwira simba, iri nyore pakuisa uye kugadzirisa. Aluminium yekupedzisira ine hydrophilic firimu inogamuchirwa kunatsiridza kupisa kutapura mwero wemvura yakanyorova uye huwandu hwekupisa kupisa coefficient yeyuniti.
Yakareba Tube Dhizaini
Iyo kureba kwechubhu pombi yekubatanidza pakati pemukati unit uye yekunze unit inogona kuve 50m, uye donhwe repamusoro ndere 25m. Zviri nyore kuisa iyo yemukati neyekunze unit panzvimbo yeprojekiti.
Kubudirira Kwakanyanya Kupisa Kwekushisa Fin
Mhangura chubhu ine -7.94 yakakwira zino uye yakakwira yemukati tambo, zvine mwero kuyerera mwero, kupisa kupisa uye kudzikisira kwakazara kuita ndiko kwakanyanya.
Copper7 mhangura chubhu kupatsanura ishoma kwazvo, chando kushanda pakupisa kupisa, chando ukobvu, kukanganisa nguva yekuwedzera.
Wire controller iri nyore uye inogadzikana, iyo inonyanya kushanda kudiki uye yepakati-saizi nzvimbo yebhizinesi.
* Rudzi rwepombi yekudziya: kutonhora / kupisa / nyowani yemhepo yekupa
*Kupisa kumisikidza renji: 16 ~ 32 ° C
*Nguva switch switch / off
*LCD inoratidzira, inoratidza yekumisikidza tembiricha, inoshanda mode, chaiyo nguva wachi (sarudzo),
vhiki (sarudzo), on / off, uye kukanganisa.
*Otomatiki restart mushure mekubatanidzazve simba
Inoshanda Kudzora Sisitimu
Kuvaka sisitimu yakavakirwa paMODBUS inogona kubatanidza kune yepakati yekudzora system neMODBUS yekutaurirana interface, ichiziva kutonga kwepakati pasina kubatana kune zvishandiso zvekushandura, zvinoenderana nepakati kusvika kune yakakura-saizi yemhepo yekugadzirisa mamiriro.
Dhizaini yekugadzira ine maviri tembiricha sensors, imwe pakudzoka vent, uye imwe pane control panel,
kuona kupisa kwemukati kutenderedza mukamuri, uye shuwa nemhepo inopisa (kudziya kwechando
modhi) yaizotumirwa kukona yega yega yekamuri zvakafanana.
Cold Mhepo Kudzivirira, Kupa Iyo Yakanyanya Nyaradzo Yekupisa
Zve kudziisa munguva yechando, kana iyo AHU yatanga, iyo coil-fini ichave isati yadziirwa isati yatanga fan fan; kana iyo AHU iri pasi pekudzora nzira, AHU yekupa fan icharega; kana kutsvedza kwapera, iyo
coil-fin ichave zvakare pre-kudziya pamberi pekupihwa fan fan kutanga futi.
Rondedzero ye Yakasimudzwa DX Mhepo Kubata Chikamu
Pashure: HHV Series Permanent Magnet Synchronous Frequency Shanduko Screw Chiller
Zvadaro: Yakachena imba Aluminium Mbiri
Mhepo Kubata Maitiro
Mhepo Kubata Chikwata Chekuchenesa
Dx Coil Mhepo Inobata Chikamu
Ceiling Heat Pump Energy Heat Kudzorera Ventilat ...